ब्रेकअप अगाडिका पाँच प्रश्न जानिराखौं – Kantipur Press
के पार्टनरले धोका दिइरहेको छ ?
सम्बन्ध तोड्ने निर्णय अगाडि आफैँसँग सोध्नु कतै यो निर्णयपछि पछुतो त हुन्न ? ब्रेकअप गरिसकेपछि उसको यादले धेरै सताउने पो हो कि, सँगै बिताएका पलले पटक–पटक उसैको सम्झँदा फर्काइरहने पो हो कि ? सम्बन्ध तोडेर खुसी हुन सकिन्न कि ? यी प्रश्नको अधिकांश जवाफ हो मा आयो भने सम्बन्ध सुधारमा लग्नु उत्तम ।
एनसेल लक्षित विष्फोट-आगजनीः शंकास्पद १६ पक्राउ